Mitady Ainga Vaovao Amin’ny Alalan’ny Fisafidianana Filoha Amin’ny Roa Farany Tavela i Mali · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Aogositra 2013 17:56 GMT
Vao nivoaka ny valim-pifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany ary tsy maintsy hotontosaina ny fiodinana faharoa [fr] [fr] hanavahana ny kandidà roa sisa tavela: Ibrahima Boubacar Keita [fr] izay nahazo ny 48%n'ny vato sy Soumaïla Cissé [fr] izay nahazo ny tokotokony ho 24%n'ny vato manankery rehetra.
Rotidrotiky ny fifanandrinana tamin'ny vondrona mpioko isan-karazany any amin'ny faritra avaratra ao aminy i Mali tao anatin'ny herintaona sy tapany. Teo amin'ny faratampon'ny krizy, nisy fitondrana miaramila notarihin'ny kapiteny Amadou Sanogo nanala ny filoha tamin'izany fotoana izany Atoa Amadou Toumani Touré tamin'ny 2012 sy naka ny fahefana amin'ny maha-andrim-panjakana mitondra azy.
Raha tsy jerena ny fironana politika, na dia ny tahan'ny fandraisana anjara aza dia efa mahafaly. Io fifidianana io no dingana voalohany mankany amin'ny fiverenana amin'ny ara-dalàna ho an'ny firenena izay miatrika ihany koa ny krizin'ny mpialokaloka sy ny tsy fisian'ny sakafo. Hotanterahina amin'ny 11 aogositra ny fiodinana faharoa.
Ny voka-pifidianana avy amin'ny fiodinana voalohany no ahafaha-manondro fa i Ibrahim Boubacar Keita [fr] no mitarika mety ho lasa filohan'i Mali ho avy, izay tombanana tamin'ny voalohany ho 55,93% ny vato mety ho azony. Fa tamin'ny farany moa dia 40% eo ho eo no azony. Efa praiminisitr'i mali i Keita hatramin'ny 1994 ka hatramin'ny 2000 tamin'ny mbola naha-filoha an'i Alpha Oumar Konaré. Avy eo izy lasa filohan'ny Antenimieram-Pirenen'i Mali nanomboka ny 2002 ka hatramin'ny 2007. Izy ihany koa no mitarika ny antoko politika Fiaraha-Mientana Ho an'i Mali (RPM).
Ibrahima Boubacar Keita ao amin'ny pejy Facebook-ny – Valam-Bahoaka
Ny tena mpifanandrina aminy amin'izany hazakazaka izany moa dia i Soumaïla Cissé sy Dramane Demblé, ankoatra ny hafa. Saingy nisy ny fanahiana fa lasa aloha loatra ny fifidianana satria mbola misy faritra sasany ao amin'ny firenena mila fehezin'ny tafika fa tsy ny vondrona mpioko.
Raha nisy ny kandidà vitsivitsy no niarahaba sahady an'i Keita noho ny fahombiazany, ny kandidà hafa sasany kosa efa nanamarika fa nisy ny tsy nampilamina nandritra ny fifidianana. Nanambara i Souamalia Cissé, izay efa kandidà filoham-pirenena ihany koa tamin'ny 2002, fa efa nisy ny vatam-pifidianana no efa feno vato hosoka sahady. Hoy ny nambaran'ny antokon'i Cissé tao amin'ny Koaci blog [fr]:
Niakatra ny sehatra ny antoko URD, Firaisana ho amin'ny Repoblika sy ny demokrasia, antokon'i Soumaila Cissé tamin'ny Alarobia (31/07) fa nisy ny “famenoana vatam-pifidianana”.
Nanampy teny ny antokon'i Cissé:
Na dia eo aza izany famenoana vata izany dia tsy azo ihodivirana ny fiodinana faharoa hijerena izay mandresy amin'ny kandidànay i Soumaïla Cissé sy i Ibrahim Boubacar Keïta raha jerena amin'ny antotanisa ato aminay [..] Nanambara ny taham-pandraisana anjara hatramin'ny 53% ny minisitra tamin'ny vokatra tsy feno. manome mpifidy tokotokony ho 3 600 000 izany. Izany hoe tsy maintsy mahazo vato 1 800 000 vao mandresy avy hatrany amin'ny fiodinana voalohany, saingy, tsy mbola nisy nahazo vato mihoatra ny 1 000 000 hatramin'ny androany aloha.
Fotoan-dehibe ho an'i Mali
Noho ny fifanandrinana amin'ny mpioko, maro ny Maliana no nafindra toerana avy amin'ny fonenany ary nialokaloka any amin'ny firenena manodidina. Amin'ny lahatsary manaraka hita ao amin'ny YouTube avy amin'ny Komisarià ambony ho an'ny mpialokaloka ao amin'ny Firenena Mikambana UNHCR, no ahitana an'i Jarrou Ag Ahmed, Maliana mialokaloka ao Burkina Faso, manazava ny maha-dingana lehibe ho amin'ny fiverenan'i Mali ho amin'ny ara-dalàna ny fifidianana filoham-pirenena:
Te-hanana filoha izahay mba hampilamina ny firenenay
Mitovy hevitra eny ihany koa ny hafa, tahaka an'i Sean Gallagher, solontenan'ny Catholic Relief Services ao Mali :
Hita ho fotoana fanararaotra ny fifidianana eto Mali, ary manantena ny vahoaka fa afa-mitsofoka tsara amin'izany fanararaotra izany ireo mpitarika vao voafidy ary hamongotra ny olana latsa-paka izay namatotra ny firenena tsy hiasa amin'ny anaran'ny vahoaka Maliana. Misy ihany koa ny fahatsapana fa hahadingana mihoatra ny fanonganam-panjakana amin'ny alalan'ny fifidianana ny firenena.
Tsy dia be fanantenana momba ny fanombohana vaovao ho an'i Mali avy amin'ny fifidianana tahaka izany ny Dr. Christos Kyrou, manampahaizana manokana momba ny fandriampahalemana sy ny famahana olam-pifandirana. Nohazavainy any amin'ny seha-baovao The Fair Observer izay mbola hatrehin'i Mali ny ny fanamby lehibe mbola tsy maintsy tratrarina:
Ny nahatonga ny fifandirana voalohany, ka anatin'izany ny fahantrana, ny kolikoly ary ny haintany naharitra tany avaratr'i Mali, no fanamby lehibe lavitr'ezaka atrehin'ny firenena. Eo ihany koa izao: ny tsy fisian'ny fotodrafitr'asa tsotra indrindra, ny tsy fisian'asa, rano ary ny singa fototra ananganana pitipitika toekarena tahaka ny vola vonona ny ho samborina [ampindramina misy zanany] no ahafahana manombana fa raha tsy mamaly ny fiarahamonina iraisampirenena ary manome fanampiana izay mikendry ireo zavatra mampanahy ireo, dia fotoana fotsiny no andrasana hisian'ny fiokoana manaraka.